Amabali eWebhu kaGoogle: Isikhokelo esiSebenzayo sokuBonelela ngamava antywilayo ngokupheleleyo | Martech Zone
Amabali eWebhu kaGoogle: Isikhokelo esiSebenzayo sokuBonelela ngamava antywilayo ngokupheleleyo
NgoLwesihlanu, Matshi 25, 2022 NgoLwesihlanu, Matshi 25, 2022 Sabrina Sedicot
Kule mihla kunye nobudala, thina njengabathengi sifuna ukugaya umxholo ngokukhawuleza kwaye ngokufanelekileyo ngomzamo omncinci kakhulu.
Yiyo loo nto uGoogle wazisa eyabo inguqulelo yomxholo omfutshane obizwa ngokuba Amabali kaGoogle eWebhu.
Kodwa ngawaphi amabali ewebhu kaGoogle kwaye anegalelo njani ekuntywilisweni ngakumbi kunye namava omntu? Kutheni usebenzisa amabali ewebhu kaGoogle kwaye unokwenza njani eyakho?
Esi sikhokelo sisebenzayo siya kukunceda uqonde ngcono izibonelelo zokusebenzisa la mabali ewebhu kunye nendlela yokuwasebenzisa kwiimfuno zakho.
Yintoni iBali leWebhu kaGoogle?
Amabali eWebhu angumxholo wesikrini esigcweleyo sewebhu esityebileyo ngokubonakalayo kwaye ikuvumela ukuba ucofe okanye uswayiphe ukusuka kwelinye ibali ukuya kwelinye. Ifana ncam namabali kaFacebook kunye ne-Instagram. Nazi phezu 20 million amabali web ezikwi-intanethi zizonke kwaye ukusukela ngo-Okthobha ka-2020, imimandla emitsha engama-6,500 ipapashe ibali labo lokuqala lewebhu.
Banokubonelela ngolunye uhlobo kubathengi abazibandakanya nomxholo ngexesha lokuhamba kwabo kusasa okanye beskrola ngokungenanjongo kwifowuni yabo ngelixa behleli phambi kwe-telly yabo. Njengeshishini, kunokuba luncedo ukufikelela kubaphulaphuli ojolise kubo, ngakumbi ngempembelelo kaGoogle.
Kutheni kufuneka usebenzise amabali eWebhu kaGoogle?
Ke kutheni usebenzisa amabali eWebhu kaGoogle? Bayinkqubela phambili kukhangelo lukaGoogle olunokuba luhle ekutsaleni ukugcwala kwabantu abaninzi kunye nokunika umxholo wakho wewebhu ithuba lokubonwa. Zininzi izibonelelo zamabali ewebhu kaGoogle anokuza ngokuwasebenzisa kwaye afanele umgudu ofunekayo wokuwenza ukusuka ekuqaleni.
Ukonyusa umgangatho wakho -Ukhuphiswano lokubeka kumaphepha aphezulu kaGoogle luyingozi. Kuphela I-5.7% yamaphepha iya kufakwa kwizinga eliphezulu le-10 iziphumo zokukhangela kwisithuba sonyaka wokupapashwa, ngokutsho kwe-Ahrefs. Amabali ewebhu kaGoogle akunika ithuba lokubeka indawo kuqala kwiziphumo zokukhangela. Ukusebenzisa iiNkonzo zeWebhu kaGoogle, ngokubanzi, kunokukunceda ukuba uhlele ishishini lakho kuPhendlo lweSiphumo samaPhepha (IINKONZO). Ukwenza oko kunokuzisa i-traffic eninzi kwaye ngethemba, ukuthengisa ngakumbi!
Isiqulatho kwabelwana ngaso ngokulula -Olunye uncedo oluphambili lwamabali ewebhu kaGoogle kukuba unokwabelana ngomxholo ngokulula nabahlobo kwi-Intanethi, usapho kunye noogxa basemsebenzini. Ibali ngalinye lewebhu linokubonelela ngomxholo onentsingiselo anokuthi umsebenzisi abelane ngawo ngokulula ngaphandle kokwenza nayiphi na i-tweaking okanye ukuhlela phambi kokuba acofe ukwabelana.
Inika ukufikelela okuphezulu -Amabali ewebhu kaGoogle linqaku elenziwe ngokukodwa kwiiwebhusayithi eziphathwayo ezibonwayo. Ngokufana neendaba zombini ze-Instagram kunye ne-Facebook, inokunika ithuba elihle lokudala kunye nokongeza amabali kwiiwebhusayithi zabo ze-WordPress kunye nezinye izicelo ezidibeneyo. Amabali aboniswa kwiziphumo zophendlo ezifumanekayo kwizigidi ukuba zicofe kuzo, kunabantu abambalwa
Inkulu kuLungiselelo lweNjini yoPhando -Ukukhangela injini yokukhangela (seo) ibalulekile kubantu abaninzi nakumashishini xa bezama ukwenza ngcono ubukho babo kwi-intanethi. 70% yabathengisi be-intanethi yithi uphendlo lwendalo lungcono kunophendlo oluhlawulweyo lokuvelisa intengiso. Amabali ewebhu kaGoogle adibanisa ezona ndlela zilungileyo ngokwenza umxholo obandakanya ngakumbi ongayi kubekwa kukhangelo lukaGoogle kuphela kodwa ngeMifanekiso kaGoogle kunye neApp kaGoogle.
Amabali eWebhu anokwenza imali -Amabali ewebhu kaGoogle anika ithuba lokuba abapapashi benze imali ngomxholo ngoncedo lweentengiso ezigcwele isikrini kunye namakhonkco adibeneyo. Abakhangisi banokuzuza koku nabo, babonelele ngamava abonakalayo ngakumbi ngevidiyo Ukuxoxa ngamabali.
Inceda ukulandelela amava omsebenzisi kunye nokulinganisa ukusebenza -Ngolu hlobo lomxholo, abapapashi banokulandelela ngokulula amava omsebenzisi kwaye bavumele ukuba balinganise ukusebenza kwebali ngalinye abalipapashayo. Unokudibanisa ezi kumaqonga afana neGoogle Analytics, eyona nto ilungileyo ukuqokelela ulwazi ngokubanzi kwiwebhusayithi yakho.
Ibonelela ngamava okusebenzisana kunye nokuntywila kubasebenzisi bakho -Enye yeenzuzo eziphambili zamabali ewebhu kaGoogle kukuba ibonelela ngamava okunxibelelana kunye nokuntywila kubasebenzisi bayo. Inika umshicileli ukhetho lokubandakanya izinto ezisebenzisanayo njengemibuzo kunye neevoti, ezinokukuxelela ngakumbi ngabaphulaphuli bakho.
Abonwa phi amabali eWebhu kaGoogle?
Amabali eWebhu anokuphononongwa xa ekuGoogle kuwo onke amaphepha okukhangela, uFundo lukaGoogle, okanye iMifanekiso kaGoogle. Nangona kunjalo, kuyafaneleka ukuba uqaphele ukuba amabali ewebhu kaGoogle anokubonwa ngoku kuphela kubasebenzisi base-US, baseIndiya naseBrazil. Kuphela ngumcimbi wexesha nangona oko kuya kwanda ngakumbi.
Ukuba unethamsanqa lokuba kwelinye lala mazwe mathathu, iya kubonakala ekuqaleni kweziphumo zakho zokukhangela. Njengoko ifikeleleka ngokulula, awuyi kuba nangxaki yokuyifumana.
Uwenza njani amabali eWebhu kaGoogle?
Ukudala ibali lewebhu akufuni ukuba ube nesixa esikhulu soyilo okanye amava obugcisa. Kanye njengawo nawaphi na amaqonga eendaba ezentlalo anenqaku lebali, kulula kakhulu ukwenza elinye. Nazi iingcebiso ezimbalwa onokubhekisa kuzo xa usenza ibali lakho lokuqala lewebhu.
Sebenzisa umhleli obonakalayo - Amabali ewebhu WordPress plugin yindawo enhle ukuqala.
Cinga ngebali -Yenza ibhodi yamabali kwaye uphawule phantsi iinjongo zakho okanye iinjongo zomxholo.
Yenza ibali lewebhu Tsala izixhobo zakho ezikhoyo kwaye urekhode / uqokelele ibali kwaye usebenzise umhleli obonakalayo ukuwenza.
Papasha ibali lewebhu -Papasha ibali kuGoogle kwaye ubukele itrafikhi ibhabha.
Imizekelo yamabali eWebhu kaGoogle
Kuyafaneleka ukuba nemizekelo yamabali ewebhu kaGoogle ukuze ukuba uthatha isigqibo sokuwenza ngokwakho, unenkuthazo yokusebenza kuyo. Nantsi imizekelo embalwa yokuqalisa, cofa ukuyivula.
I-VICE ithathe impembelelo kubhubhane kunye nabo bapheka ekhaya ngothotho lokupheka oluvalelwa bodwa njengoko kubonisiwe ngasentla. Eyona ndlela ilungileyo yokulungiselela abantu abaninzi, kunokuba bajolise kubo.
U-Seeker udale eli bali lewebhu, elijolise ekwabelaneni ngolwazi lwezenzululwazi kodwa umfanekiso kunye nesicatshulwa esisetyenzisiweyo akunikezeli kakhulu. Kwathetha ukuba abaninzi banokucofa kuyo ukuze banelise umdla wabo.
Isixhobo semfundo seNyiloni esibonelela ngebali lewebhu elingasentla sibonelela ngamava aguqukayo kubasebenzisi kungekuphela nje ukusuka kwi-engile ebonakalayo kodwa ikwabonelela ngexabiso.
Iimpawu zamabali ewebhu kaGoogle ziyindlela entle yokwabelana ngolwazi ngendlela entsha esebenzisanayo nenika umdla. Nokuba ungumthengi, umpapashi, okanye umthengisi, kukho izibonelelo zokusebenzisa ifomathi kaGoogle yokubalisa ibali engamabali ayo ewebhu.
tags: ukwenza imali umxholoibali lewebhu le-googeuphandogoogle webaliibali lewebhu likagoogleNziswanoukubalisa amabali asebenzisanayouphando lwezinto eziphilayoSEOinyokaumxholo okwabelwanayoUmxholo wentlaloukubalisa ibaliUkuxoxa ngamabaliyokulandelelaamabali ewebhuibali lewebhuWordPressiplagi yamagama
USabrina Sedicot ngumthengisi onamava, ogxile kuzo zonke izinto zedijithali. Uyaphangela Appnova, i-arhente yokuyila esekelwe eLondon naseRoma. Usebenza kwiiprojekthi kulo lonke uyilo lwe-UX/UI, i-eCommerce, iBranding & Content Production. Ukhuthazwe zizo zonke iindlela zokubalisa amabali edijithali kwaye unomdla wokwenza izisombululo ezilungiselelweyo ezinokuzisa amava okwakha iibrendi.
Zithini iiNkcazo zeMeta? Kutheni le nto zibalulekile kwiiCwangciso zeeNjini zokuKhangela zeOrganic?